Fahatapahan-jiro nandritra ny lalaon’ny Barea: voaroba no nodoran’ny olona ny biraon’ny Jirama | NewsMada
Fahatapahan-jiro nandritra ny lalaon’ny Barea: voaroba no nodoran’ny olona ny biraon’ny Jirama
Niafara tamin’ny fandrobana sy ny fandorana ny biraon’ny Jirama ao Maroantsetra ny savorovoro noho ny fahatapahan-jiro nandritra ny lalaon’ny Barea sy i Niger, ny alin’ny talata teo.
Nirefodrefotra ny grenady lakrimozena tao an-drenivohitr’i Maroantsetra nandrava ireo andian’olona nandoro ny biraon’ny Jirama, ny alin’ny talata 19 novambra 2019 nandritra ny lalao nifanandrinan’ny Barea sy ny ekipam-pirenenan’i Niger, ho amin’ny fifanintsanana amin’ny “Can 2021”. Vao teo amin’ny 25 mn nandehanan’ny lalao, tapaka tampoka ny jiro ao Maroantsetra an-tampon-tanàna kanefa ny olona rehetra, mbola samy nifantoka tanteraka tamin’ity lalao ity. Fotoana fohy taorian’izay, nifamotoana tampoka ny vahoaka ka vory lanona teo anoloan’ny biraon’ny Jirama. Andian’olona efa ho anarivony, araka izany, no nitangorona manoloana ity biraon’ny Jirama ity, araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Niara-nitalaho teo ny hamerenana haingana ny herinaratra ireto andian’olona marobe ireto. Fantatra fa mitantana azy ny orinasa Tozzi Green, saingy tsy nisy tao an-toerana izy ireo ka antsoantso tsy nisy mpihaino ny an’ireo andian’olona teo anoloan’ny biraon’ny Jirama. Vokany, raikitra teo ny hatezeran’ny olona ka nibosesika niditra an-keriny niditra tao amin’ny birao ka nanimba ny entana rehetra tao an-trano.
Potipotika avokoa ny entana rehetra tao amin’ny biraon’ny Jirama ary tsy vitan’izay fa mbola nodoran’izy ireo ihany koa. Niditra an-tsehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana nandrava ireo mpanao fihetsiketsehana ka voafehy ihany ny fahasimbana tao amin’ny biraon’ny Jirama. Voalaza fa ireo antontan-taratasy mirakitra ny faktiora isan-tokantrano ireto kilan’ny afo ireto.
Nahitana hatezeram-bahoaka koa ny tany Mahajanga…
Tsy tany Maroantsetra ihany fa nahitana hatezeram-bahoaka toy izao koa tany Mahajanga nandritra iny lalao iny noho ny delestazy, toy ny tao Tsaramandroso Ambony sy Ambany, Mahavoky Avaratra sy Atsimo, Tsararano hatrany Amboavoalanana. Efa tamin’ny 11 ora alina kosa vao niverina ny jiro tany an-toerana.